!! #malaysia #မလေးရှား #လူသတ်မူ့နှင့် ပတ်သက်၍ မြန်မာ နှစ်ဦး #ထပ်မံ ဖမ်းဆီး | democracy for burma
!! #malaysia #မလေးရှား #လူသတ်မူ့နှင့် ပတ်သက်၍ မြန်မာ နှစ်ဦး #ထပ်မံ ဖမ်းဆီး
tags: နိုဝင်ဘာ ၂၄ နေ့တွင် ပီနန်း, ရဲမူးကြီး Abdul Rahim Hanafi က, Burma, burmese killed, Cherok Tokun, malaysia, Myanmar, Sungai Bakap တွင် ဦးခေါင်းမဲ့ ကိုယ်ခနာ အား
မလေးရှား လူသတ်မူ့နှင့် ပတ်သက်၍ မြန်မာ နှစ်ဦး ထပ်မံ ဖမ်းဆီး
လွန်ခဲ့ သည်အပတ်အတွင်း မလေးရှား ပီနန်း ၊ Cherok Tokun ဒေသ၌ လူသတ်ကာ ခန္တာကိုယ်ပိုင်းဖြတ်သည် နေအိမ် နှင့် လူသတ်မူ့ကျူးလွန်သူဟု မသင်္ကာရသူ မြန်မာ နှစ်ဦးအား ရဲတပ်ဖွဲ့မှ ဖော်ထုပ်ဖမ်းဆီသည် ဟု ယနေ့ NST သတင်းတွင် ဖော်ပြပါသည်။
ရဲမူးကြီး Abdul Rahim Hanafi က “လွန်ခဲ့တဲ့ လေးလ လောက်က နေ ဒီအသက် ၃၀-၄၀ ကြား နှစ်ယောက် က အဲ့ဒီရွာ မှာ အိမ်ဌားပြီး အဲ့ဒီ ဌားနေတဲ့ အိမ်ရဲ့ ခြောက်အိမ်မြောက်မှာလည်း နောက်ထပ် တစ်လုံး ထပ်ဌားပါတယ် ၊ ဒီလူသတ်မူ့က သူတို့မြန်မာ အချင်းချင်း လက်စားခြေ လူသတ်မူ့ပါ” ဟုပြောကြားပါသည်။
နိုဝင်ဘာ ၂၄ နေ့တွင် ပီနန်း Bukit Mertajam ရှိ စားသောက်ဆိုင် တစ်ဆိုင်ရှေ့တွင် ကိုယ်ခန္တာမဲ့ ဦးခေါင်း ၊ ကြာသပတေးနေ့ ၌ Sungai Bakap တွင် ဦးခေါင်းမဲ့ ကိုယ်ခနာ အား ဂုန်နီအိတ်အတွင် ထည့်ထား ပြီး လွန်ခဲ့သည် တနင်္လာနေ့တွင် လူသား ဦးခေါင်း နှင့် ဘယ်ဖက်လက်သည်များကို တွေ့ရှိရပါသည်။
အဆိုပါလူသတ်မူ့နှင့်ပတ်သက်ပြီး ယနေ့အချိန်အထိ မြန်မာ ၁၅ ဦးအား ဖမ်းဆီး ထိန်သိမ်း၍၊ မြန်မာ နိုင်ငံ တွင် ဖြစ်ပျက်နေသော ဘာသာရေး အခင်း နှင့် ဆက်နွယ် မူ့ရှိမည် မဟုတ်ဟု ရဲတပ်ဖွဲ့မှ ပြောဆိုပါသည်။
← !!! #MNHRC #ကိုအောငျနိုငျ(ခ) #ကိုအောငျကြျောနိုငျ(ခ) #ကိုပါကွီး #သဆေုံးမှုနှငျ့ပတျသကျ၍ မွနျမာနိုငျငံအမြိုးသားလူ့အခှငျ့အရေး ကျောမရှငျ၏ စုံစမျးစဈဆေးမှုထုတျပွနျခကြ
#MALAYSIA #Police #found #slaughterhouse” #linked to #Myanmar #murders →